Izay mihaona amin'ny lehilahy Breziliana
Izay mihaona amin’ny lehilahy Breziliana
Mba hahitana ny olona ny nofy te-maro ny vehivavy. Eny, mba ho marina, ny olona sasany ihany koa ny mikasika ny fanontaniana izay mba hihaona ny olona. Ny vavahadin-tserasera dia hanampy na ny voalohany sy ny faharoa. Raha ny hevitrao fa ny mandeha amin’ny, dia hahita ny tenanao amin’ny fitsipika Mampiaraka toerana, dia ho zava-dehibe ianao diso. Ny toetra fototry ny afo dia toy izao manaraka izao. Mba hahazoana mahafantatra tsara ny olona iray, ianao mila misoratra anarana ao amin’ny habaka na vatan-kazo eo amin’ny fampiasana ny kaonty iray amin’ny tambajotra sosialy malaza indrindra (asa no natao ho an’ny Breziliana ny lahatsary Mampiaraka sy Facebook). Manaraka, ianao dia mila mameno fohy teny fampiharana ny fepetra takiana mba ho avy mpiara-miasa. Raha ny momba ny asa tsy misy hafa amin’ny hafa ny Mampiaraka toerana.
Miditra ao amin ny vavahadin-tserasera, Saintes, ary miandry ny hafatra. Ianao dia mahazo fampahatsiahivana hoe izay misy ankehitriny ny lehilahy iray: amin’ny teny hafa, ny fanontaniana izay mba hihaona ny olona, tsy mendrika izany. Tonga any amin’ny café, ny trano fisakafoanana, ny toerana fitsangantsanganana, tora-pasika, Boulevard, ny Zaridaina, ny kianja (lisitra no tsy manam-pahataperana) ary nanangana ny fivoriana misy olona eto sy ankehitriny. Noho izany, ny recap ny vaovao, ny fomba hitsena ny olona. Mba handamina ny daty amin’ny mety suitor, tokony hijery ny tsara indrindra (volo stylish), ary ity karazana Tongotra. Mifidy ny toerana ho an’ny daholobe ao amin’ny tanàna centre (mipetraka eo amin’ny latabatra ao amin’ny trano fisotroana kafe, mandeha amin’ny Zaridaina, sns.). Ataovy ny kahie, na (ho an’ny vokatra efa lasa ny fampiharana manokana). Aza adino ny zainetica ary miandry ny hafatra momba ny endriky ny olona ny nofy teo akaiky teo. Eo amin’ny efijery miseho ny fampahafantarana.
Soa aman-tsara hihaona sy hanao ny fanendrena
Tsarovy, ny kokoa-bahoaka ny toerana misafidy, ny kokoa knights dia hamaly ny fangatahana. Ampy fotsiny ny mipetraka an-trano sy ny mieritreritra momba ny toerana mba hitsena ny olona. Handray an-tanana ny raharaha eo an-tanany ary hihaona amin’ny voalohany kandidà ho ny andraikitry ny iray manakaiky ny mpiara-mitory ny vaovao androany
← Ny Fitsangantsanganana Tany Brasilia. Ny fiarahana amin'ny tranonkala Brasilia ho maimaim-poana, tsy misy fisoratana anarana, ho an'ny fifandraisana matotra